Ikhwalithi yomkhiqizo we-AASraw
Ngekhwalithi ye-AASraw, isiqubulo sethu esithi "Izimpahla ze-Genius ziyabonakala" sisho lokho. Kwabanama-steroid abanolwazi abaphekayo noma abanikazi bamalebhu abangaphansi, kusukela ekubukekeni nasekunukeni nakwezinye izinhlamvu zomzimba, bangatshela ukuthi izimpahla zinobuhlakani noma zimbi. Kepha ukusiza ezandleni ezintsha, Zonke izinto eziluhlaza ezivela ku-AASraw ziqinisekisiwe ngokuhlanzeka okungekho ngaphansi kuka-98%, iningi lezimpahla lihlanzekile 99%. Kunemibiko yokuhlolwa kwe-HPLC ne-COA njengokwesekwa okuyisisekelo kwesithembiso sethu. Futhi, sikhuthaza amaklayenti ethu athengiwe ukuthi ahlole i-powder eluhlaza ngamaLabhoratri asendaweni futhi singakhokhela izindleko ezihlobene.